Ogaden News Agency (ONA) – Shir waynihii jaaliya JOKA oo sirasmi ah uga furmay Port Elizabeth : “Nin maqnaana wuu yimid Nin yaraana waynaa”
Shir waynihii jaaliya JOKA oo sirasmi ah uga furmay Port Elizabeth : “Nin maqnaana wuu yimid Nin yaraana waynaa”
Posted by ONA Admin	/ March 16, 2013
Nin maqnaana wuu yimid Nin yaraana waynaa
Iyadoo 2dii maalmood ee lasoodhaafay ay socdeen shirar goo goos ah oo loogu diyaar garoobayay shirwaynahan islamarkaana ay iska soo daba dhacayeen wufuuda faraha badan ee kasoo kicitimay dhamaan gobolada Gauteng, Eastren Cape, Cape town, Kuwazulu natal, ayaa ugu danbayn tii lagu dhawaaqay furitaanka shirwaynihii 9aad ee jaaliyada oo sanadkas wakhtigan oo kale lagu qaban jiray magaalada Uitanhage ee gobolka Eastren Cape .
Masraxa shirka lagu qabanayo wuxuu u egyahay mid si wayn looga hawlgalay; ka sakaw calanka Ogadenia iyo calamadaha kale ee halganka ee lagu qurxiyay hoolka waxaa dhinaca kale lagu wadhay tabeelayaw dhaadheer oo geesahana loogaga xidhay buufimo loo ekeysiiyay calanka Ogadeeniya.
sidoo kale waxaa indhaha ka soo qaybgalayaasha aad usoo jiidanayay quluubtoodana farxad galinayay caruur da’yar oo loogu labisay calanka ogadeenia oo iyaguna diyaar u ahaa inay soodhaweeyaan halganka.
Boqolaalka qof ee ku soo xaadiray hoolka waxaay u ekaayeen kuwo aad kalsooni ugu qaba halganka kuna qanacsan hawsha socota diyaarna u ah inay qayb ka qaataan: waxaa safafka dhaadheer ee kala qaybsan fadhiyay dumar ku soo labistay calanka Ogadenia, kuwa lulaya calanka oo wajigooda kalsooni iyo niyad wanaag kamuuqato; waxaase xiiso dheeri ah ulahaa kasoo qayb galayaasha markii uu daadihiyaha shirku sheegey inuu jiro Barmaamij ay ciyaalku ku leeyihiin shirka waxaana halmar ishaydu ku dhacday wiil iyo gabadh yar oo aad moodo inay hubaan in ay matalikaraan caruurta Ogadenia kadibna aniga xataa laftaydu waxaan sugayay doorka caruurtu kaqaadan doonto shirkan waxa ay noqondoonto.
“shirkii 9aad ee jaliyada Ogadenia ee Koonfur Africa si rasmi ah ayuu inoogu furmay” sidaa waxaa hadal kooban ku yidhi gudoonka jaaliyada Halgame Bashiir Muxumed oo dadwaynaha usheegey waxqabadkii,duruufihii lasoo gudboonaaday jaaliyada. Gudoomiyaha oo hadalkiisii siiwada wuxuu yidhi; “marna kuma hedawno wadankan aan joogno waxaanuna lawadaagnaa waxkastaba war iyo wacaalba ciidanka xoraynta ” . Wuxuu gudoonku amaan usoo jeediyay ciidanka xoraynta Ogadenia isagoo sheegey in ay cadawga ugu galeen xiryahoodii iyo godkii uga dhexqodnaa islamarkaana aduunka tuseen in khayraadka ogadenia ay difaacikaraan.waxaa kale uu gudoonku akhriyay dhibanayaashii ugudanbeeyey ee cadawgu waxyeeleeyey.
Waxaa laxidhiidhay ka dib wacdigii dhaqanka u ahaa hawl furista halgamaaga Ogadenia. Wacdigan aad ugu toosnaa waaqica bulshadu kujirto maanta ayuu sheekhu soo jeediyay wuxuuna kusoo gabagabeeyay duco kaga ilmaysiisay inbadan aanan rajaynayno in ay maqbuul noqon doonto Ilaahay idankii.
Iyadoo ay saf utaxnaayeen wufuuda kakala socotay qaybaha kala badalan ee jaaliyada ayaa horaanba loogu yeedhey OYSU Xoghaya guud Halgame Abdi naasir Aways (Axbaab) oo si maqal iyo muuqaalba ah usoo bandhigay waxqabadkii dhalinyarada OYSU ee sanadkii 2012. “Waxaanu xooga saaray ururada bulshada caalamka gaar ahaan kuwa u ololeeya xuquuqda aadanaha iyo dadka aqoonyahanada waxaanuna ku dadaaalaynay inaanu dunida tusno dhibka kajira ogadenia” ayuu yidhi. Marka loo fiirsado musawaradii iyo muuqaaladii uu soo bandhigay Ururka Dhalinta iyo Ardayda Ogadeenia ee South Africa, waxaa siwaafi ah loo fahmikaray waxqabad aad u wayn iyo dadaal hagar la’aan ah oy dhalintu sameeyeen sanadkii lasoodhaafay. OYSU Cape town Halgame Faatulle ayaa makhraadi uga noqday Axbaab wax qabadkii dhalinta iyo ardayda isagoo bandhigiisa ku daray waxyaabo muuqda oo ay kamid tahay xidhiidho waawayn oo ay lasameeyeen bulshada caalamka oo ay gaadhsiiyeen fariinta Ogadenia. Dadka ay fariimahan gaadhsiiyeen waxaa kamid ahaa xafiisyada UNta ee u xilsaaran arimaha Geeska Africa, iyo doodo ay kaqayb galeen loogana hadlayay nabad usamaynta Geeska Africa halkaas oo talooyin iyo warbixinaba ay ugu gudbiyeen masuuliyiin shibil ah iyo kuwo dawli ah ba,OYSU waxay sanadkan siwayn uga muuqatay dalkan koon fur africa waxayna xajiiqiyeen in ururkadhalintu tabagaly kana baxay wakhtigii kala guurka ahaa.
dhanbaalku wuu kawaynaa dhanbaal sidaha:
Nimco Cumar iyo 3ex caruur wiilal iyo gabdhoba ah muuqaalkoodu wuu iga farxiyay fariintooduna way iga oohisay: waxaa soo muuqaday gabdho iyo wiilal ya-yar oo kushaqlan kuna sharxan calanka iyo calaamadaha halganka Ogadenia balse quruxdaasi marnaba mayna tilmaamin fariinta ay xanbaarsantahay,waxaa halmar dareenkayga badalay fariinta cunugta, waxaana marnaba is dhihijirin dadka wawayni waxay u baahan yihiin inay dadka yar-yar dhagaystaan haddase waxaan is leeyahay ciyaalkaa mudan in ladhagaysto. Waxaan iskudayay inaan ilaashado xirfadayda suxufinimo oon xajisto illinta dareenkaygana isu dheelitiro balse marna maana u adkaysan karin dhibka ciyaalku soo bandhigeen, fariimaha ay akhriyeen ee dhiilada leh. Dareenkasi kali igumaahayn oo goobtuba waxay u ekaatay meel tacsi loofadhiyo, iyadoo qofkastaaba ka dheeraaday inuu codbaahiyaha ku soo dhawaado heerka qiirada oo aad u kululaaday darteed ugu danbayna cidkastaba iskeed bay ugu baroordiiqday dadkii ogadenia lagu xasuuqay iyo kuwa lasoo barakiciyayba.
Caruurtii goobta ka hadlay waxay muujiyeen inay matali karayaan da’yarta Ogadenia.”Waxaa wadanka yagii kajira hooyooyin iyo caruurtoodii oon seexan cunno la’aan iyo cabsi darteed waana arin caalamku ogyahay balse aan cidna danaynin” ayay ahayd fariintoodu.
Mr.W.E. kalani oo ah khabiir South African ah una ol oleeya madaxbanaanida Ogadenia ayaa isaguna qaybtiisii libaax ka qaatay shirwaynihii wuxuu isaguna dhankiisa ka warbixiyay waxqabadkiisii isagoo sheegey inuu dagaalo badan kaga guulaystay kiisas kusocday dadka qaxootiga ah wuxuuna ugu bishaareeyey dadkii meesha joogay in sharciyadda uu waxbadan ka qaban doono, wuxuuna hadalkiisii ugu danbaysiiyay dagaalku ha socdo intay Ogadenia dadkii lahaa kaga soo noqonayaan.
Waxaa xusid mudan dadaalkii qaybta madadaalada oo Shirka saacadihiisii dheeraa ka ilaaliyay ergooyinkii inay daalaan ama caajisaan; heeso guubaabo ah iyo gabayo murtidoodu mugwayntahay ayaa shirwaynaha lagu madadaaliyay. Waxaa qasab igu ah inaan sheego Abwaan Khadar Colaad gabayguu jeediyay ee “Talaabo Qurux” waxaana lays xusuusiyay inay halkaas kasii socon doono malmaha hadhay shirka, barina lagu balan san yahay 9:00 Subaxnimo iyo Hoolka weyn ee shirka uu ka furmay in bari la iskugu soo labto halkaasna laga sii an baqaadi doono maalintii labaad ee shirka Jaaliyada Somalida Ogadenia ee Joka kaas oo ah Shir waynihii Sagaalaad ee jaaliyada South Africa ee JOKA ay qabato.
Xafiiska Warfaafinta JOKA/ONA.